Ndakamufongoresa pamuti ndokusumudza kaskirt ndokuinyudza yese! - Nhau Dzevakuru
Ndakafongoresa babe rakabata pamuti ndokusumudza kaskirt ndokuinyudza mboro yese! Musi uyu ndakafara sei iwe masasi eharare kubva pandakatanga kusvira 1998 ndanga ndisina kumbosvira mukadzi akapfeka tuma mini-skirt and zvaitondinetsa kuti nei zvichidaro. Pandakwira taxi nebabe iri I was happy, takatanga kutaura paya munongozivawo vasikana ve mzansi vanoda maZimbabweans too much. Ndakangobuda hangu ka R30 ko ndaidiii ini ndambowanawo akapfeka mini-skirt.
Kune vakadzi vanochengeta choya vakomana uuuuuuhm kuita zisango chairo unoita seuchamutsana nenyati mumazichoya achooo uuu, hanzi i culture yedu hatibvumirwe kugera choya kusvika taroorwa. Musi wekuchigera panotoda lawn mower chaiyo chigero hachingambogeri ipapo. Takatanga zvedu kubatabata tisati tapinda muchisango macho chaimo. MaSouth Africans ma auto chaiwo kungodai atotota, maZimbabweans unobata wabata ugokisa wakisa pamwe ukatosvika pakupinza asina kutota.
Vakomana hapana chinonaka sekusvira zvekubirira. Ndakafongoresa babe rakabata pachikwenzi ini ndokuinyudza zvangu. Babe raiita kufambirira richipinda muchi kwenzi chiya ini ndichingoteverera chete irimo, mwana uyu asikana kusajaira mboro here kana kuti hiii nhai? Akatanga kubvunda muviri wese zvekuti waiona nematako achiita kuzuzuma so. Hana yairova but munongozivawo kana mboro yakamira munhu anunge achifunga nemboro anozofunga chaizvo atunda. Zvino musoro wese kusvika padumbu zvanga zvachiti njooo mugwenzi ini nematako nebeche tisu tanga tasara tiri pamhene zvedu. Ndakaramba ndichinyudza mboro chete apa babe richingofema semombe yakasungwa pajoko riri mugwenzi imomo.
Ndazonzwa babe rosura ndikaziva kuti razipirwa, kana uchida kuti babe risure unopinza mboro yose mubeche wobudisa yose panze woipinza futi, ukazviita uchiwedzera speed yekupinza nekubudisa unobva wawanza pressure mubeche saka unozonzwa mukadzi achisura nekubeche uku because paunopinza mboro inenge ichifosa mhepo out yet mboro inenge yakazadza beche saka pachizorira manje kuti bweeee.
Again kana wakavhura magaro ake uku wakanyudza mboro sezvandaiita babe iri unoita kuti mudumbu make muite pressure, paunonyudza mboro rinofanira ku meeta your thrust, kana ukanyudza iye asingaitarisire anobva aresva kufema hense kakuvhundukira obva asura, izvi zvinoitika kana ukanyanya kukoirisa nespeed yakanyanya mind you mukosho is closely linked to beche ndosaka uchiti ukabata mukosho pakutamba naye mukadzi anonyanyonakirwa stereki and anokurumidza kutunda.
Iyi yekufongora iyi babe rakabva ratunda paya, tadya tumababa twedu paya ko matissue obvepi musango imomo. I used her underwear kupukuta beche ko ndopandaishandisa mashizha here. Takayenderera mberi zvedu paya ndokuwaridza mashizha pasi ndokuradzika babe manhede. Ndakapeta babe zvokuti musoro wake wanga wava pakati pemabvi ake, beche ranga rasara rava pamhene seruware kudai iwe masasi eharare, apa unogona kuona chibereko kuti ichi nhai ndichibva ndaishwetedza mukati kati mboro zvokuti mwana aita kuscreamer so achindipushira kure uko.Hanzi its painfull yabaya kumberi mberi, ndokuita the same zviri gentle zvangu musikana ava pakati pekusipakwa ndopandakatanga kunyudza zvekumama manje, ndaiiti ndikaiti shweeeeee ndoti koi koi, ndobudisa ndoiti shweeeeeee ndoti koi koi, kuzodaro manje yainge yangova musodzi chete pamatama netudzihwa turi watery so, mboro idzi hakuna mukadzi asinganakirwi nayo.
Babe raiita kurova rova chest hanzi iri kupisa ini aaaa chest yopisa ini ndichisvira beche how come. Varume ukaona mboro yakanyatsomira babe rinenge richiiita kuinzwa ichibaya moyo chaiwo. Ndakaramba ndichisvira nekudawo kutunda ndopandaona munhu ati rukutu asisina kana simba. Ndiko kusvira kauku vakomana. Vakadzi vanoda mboro refu uye yakakora seyangu nekuti vane nhevedza mutundo, aaaa ndaona mboro yoita kushinya kupinda ndikaziva kuti babe ravakunyanyonakirwa ende ravakuda kutunda nekuti madziro ebeche anocontractor kana mukadzi akuda kutunda. Ndakawedzera kukoira ndichikokawo huronyo kuti titundirane, ndiye tsaaa tsaaa tsaaaa pamwe chete.
Previous articleNdakarohwa nyoro na Headmaster ndichitsvaga nzvimbo yemwana yechikoro!
Next article5 Different Types of Women pakusvirana muZimbabwe